စေတ - အပြောင်းအလဲနှင့်တိုက်ခတ်လာသောလေ... - MoeMaKa Media
Home / Essay / Literature / Se Ta / စေတ - အပြောင်းအလဲနှင့်တိုက်ခတ်လာသောလေ...
စေတ - အပြောင်းအလဲနှင့်တိုက်ခတ်လာသောလေ...
Essay, Literature, Se Ta
အစပထမက ကျွန်တော်နေတဲ့လောကကြီးကို ဒီစကြဝဠာကြီးထဲမှာတခုတည်းပဲရှိတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆအမှတ်မှားခဲ့မိသေးတယ်။ တကယ်ကကျွန်တော်နေတဲ့လောကကြီးမှာ အမျိုးမျိုးအစားစားကွဲပြားနေတဲ့လောကများစွာခြားခြားနားနားရှိ‌နေကြတာကို သိပ်မကြာသေးမီနှစ်ကာလတခုကမှ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါကလည်း နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းတခုငြိမ်သက်ပြီးစကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောနိုင်ငံရေး မိုးလေဝသအခြေအနေတခုအရ ဇာတ်ညွှန်းဇာတ်ကွက်တခုရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကပြရတဲ့ ကကွက်များပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့လောကထဲ ကျွန်တော့်အနီး အနားက လူတချို့ပင်လျှင် ကျွန်တော့်လောကထဲကမဟုတ်တာကိုလည်း အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။
အမှန်စင်စစ် သူတို့က ကျွန်တော်နှင့် တစုံတရာ အခြေခံကျကျ အတန်အသင့်ကွဲပြားသူများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြရမယ်ဆိုပါက ထိုသူများက လူလူချင်း လူသားချင်း အသားအရောင် ခွဲခြားအမှုအရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဘဝ တူလူသားအချင်းချင်း အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုအရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာမတူလူမျိုးကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး လူသားအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအရာများကို တိမ်းညွတ်လိုစိတ်အပြည့်အဝရှိသူများ သို့ မဟုတ် ထိုစိတ်ကို ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်လျက် လူမျိုးကြီးဝါဒတခုအပေါ်မသိစိတ်ကဖြစ်စေသိစိတ်ကဖြစ်စေ တိမ်းညွတ်သာယာနေသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ လူမျိုးခြားများစွာထဲက ဥပမာတခုလောက်ထုတ်ပြရလျှင် ငယ်စဉ် မူလတန်းအလယ် တန်းအရွယ် ကျောင်းတက်နေစဉ်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ လူပုံကဝဖိုင့်ဖိုင့်နဲ့မို့ သူ့ကိုတချို့က 'ဝက်ပဲ' ဟုချစ်စနိုးနောက်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြသလို တချို့ကရိုင်းပျတဲ့စကားလုံးများသုံး၍ နှိမ်ချခွဲခြားဆက်ဆံကြသည်များလည်း ရှိကြပါတယ်။ ချစ်စနိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နှိမ်ချခွဲခြားပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အပေါ်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသူ သူငယ်ချင်းရဲ့စိတ်ထဲက ဘယ်လိုခံစားရမလဲကျေနပ်ရဲ့လား၊ သူ့စိတ်ထဲမှာကသိကအောက်ဖြစ်သွားမည်လား၊ ထိုသူအားလုံးကထည့်တွက်စဉ်း စားခြင်းမပြုကြပါ။
တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးနေဝင်း (ဗိုလ် ချုပ်ကြီးနေဝင်း) ရဲ့ မဆလအစိုးရလက်ထက် တရုတ်ဗမာအရေးအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်က ကျွန်တော်ဟာ မူလတန်းကျောင်းသား အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစဉ် ထိုအရေးအခင်းများရဲ့နောက်ကွယ်ကအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရန် ကျနော်တို့ အသက်များကအလွန်ပင်ငယ်လွန်းပါသေးတယ်။
ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သောအစိုးရက သူတို့အပေါ်တွန်းကန်‌နေတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့အထွေထွေမကျေနပ်မှုကို လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများဖန်တီးပြီး လမ်းလွှဲပေးတတ်ပါတယ်။ ထိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကို ငယ်စဉ်ကလေးအရွယ်က သဘောမပေါက်ခဲ့ပါ။ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကြီးပြင်းလာမှမျက်စိပွင့်နားပွင့်ကာသဘောပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအများစုမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှိုင်းတခု မိထားသူများဖြစ်ကြပြီး လူသားအချင်းချင်းထားရှိရမယ့်စာနာမှုတရားအတန်အသင့်ကင်းမဲ့နေတတ်ကာ သူ့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကြည်လင်အေးမြတဲ့မေတ္တာဓာတ်ပျောက်ဆုံးနေသူများဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်ထိုသို့လူမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သူအားလုံးလိုလို လောကကြီးတွင်သူတို့ဘာသာသူတို့ကျင်လည်နေထိုင်‌နေကြတဲ့ကိုယ်ပိုင်လောကတခုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးနှင့်သူများပင်ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ ရဲ့မသိစိတ်က သွေးခွဲတတ်သော အာဏာရှင်ကိုတိတ်တခိုးအားကျနေသူများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် ထိုသူတို့ကတန်းတူညီမျှဝါဒတခုဖြင့်လူသားအချင်းချင်းချစ်ခင်နေထိုင်တဲ့လောကတခုထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ဝါဒဆိုးတခုအားဖြန့်ချိဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့နယ်မြေအင်ပိုင်ယာကိုတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားသူများပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်‌တော့ သူတို့ရဲ့လောကဟာလူသားထုရဲ့ဓမ္မလောကအစစ်အမှန်တခုနှင့်ကင်းကွာနေပြီး သူတို့ဘာသာ‌ကျေနပ်‌နေကြတဲ့အမှန်ယောင်လောကတခုနှင့်ပင်တူနေပါသေးတယ်။
တချို့က နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားသူရဲကောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ ချေဂွေဗားရားကိုတောင်မှ အင်တာနေရှင်နယ်တော်လှန်ရေးသမားထက် တီရှပ်ပေါ်ကကမ္ဘာကျော်ပေါ်ပြူလာအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်သမားတဦးအဖြစ် စိတ်ဝင်စားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ချေဂွေဗားရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်နှင့် ကျောက်သားလိုခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုကို သူတို့ကမသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ တခါတရံသူ့က 'ချေ' ကိုပြောင်ပြောင် တင်းတင်းပင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတတ်ကြသေးတယ်။ အများက 'သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း' ဆိုလျှင်သူတို့က'သခင်ကိုယ် တော်မှိုင်း' လိုက်ကြပြီး အပေါ်ယံယုံကြည်မှုမျိုးတခုနဲ့ ယုံကြည်လိုက်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။တကယ်က သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကသံစဉ်ကို သူတို့ဟာ မကြားယောင်ပြုတတ်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး လူသားရဲ့မူလမွေးရာပါအခွင့်အရေးများကို မေ့လျော့နေခဲ့ကြပါတယ်။
လူသာတိုင်းရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးများကို အာဏာရှင်တယောက်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်သည်ဟုထင်မှတ်မှားကြပါတယ်။ လူသားတို့ရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးများကိုပင် ထိုအာဏာရှင်ကပေးသနားမှသာရမယ့်အရိပ်အယောင်ရှိတယ်လို့ ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တန်တော့ မိုးသက်မုန်တိုင်းလေနီကြမ်းဟာလောကအစုအ‌ဝေးထဲကိုသက်ဆင်းကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးသက်မုန်တိုင်းဟာ လူတွေမေ့လောက်တဲ့အချိန်မှ ရောက်လာတတ်သည်မဟုတ်ပါလား။ ဘယ်လောက်ပဲမိုးကြီးလေထန် မုန်တိုင်းတွေအရှိန်ပြင်းပြင်း အချိန်တန်တော့ နွေဦးဟာလူသားအပေါင်းရဲ့အိမ်ရှေ့ကို အရောက်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ ဒီအချိန်မှာ လောကအစုအဝေးဟာ တခုတည်းပေါင်းစပ်သွားပြီး အမြင်မတူသူအားလုံးဟာ စည်းတဖက်တည်းကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။
အချိန်တန်တော့ ရယ်ဒီကယ်ငှက်တွေဟာ မိုးသက်မုန်တိုင်းတွေကိုကျော်လွှားဖို့ ရွက်ကြွေတော နဲ့ သစ်ပင် သစ် ကိုင်း သစ်ခက်တွေအပေါ်မှာ ကာလနှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာမြင့်စွာနားနေရာက အရှိန်ပြင်းစွာ တဟုန်တိုး ထပျံခဲ့ကြပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံလူသားထုတရပ်လုံးကတော့ မကြာမီအရုဏ်ကျင်းစထွက်ပေါ်လာမယ့်ရောင်နီဦးနဲ့ အတူ တရားမျှတမှုတခုနဲ့လူသားအားလုံးရဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်းဖို့မျှော်လင့်နေကြပါပြီ။
စေတ - အပြောင်းအလဲနှင့်တိုက်ခတ်လာသောလေ... Reviewed by k on 3:47 AM Rating: 5